admin, Author at Nepal eNews - Nepali Online News Portal
बच्चा जन्माएर झाडीमा फालेपछि बेलबारी/ मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित देविथान सामुदायिक वनको झाडीमा एक शिशुको आमाले लगाएको लुगामा बेरेर शिशुलाई झाडीमा फ्याँकेको अवस्थामा जंङगलमा रोइरहे अवस्थामा भेटियो नवजात शिशु (छोरी) दाउरा लिन जंगल गएका स्थानीय ६८ वर्षिया सुकमाया राईले शिशुलाई फेला पारेको ईलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले जनाएको छ । शिशु झाडीमा रुएको आवज आएपछि ति महिलाले भेट्टाएका हुन् । राईले उनी सँगै जङगल गएका स्थानीयलाई बोलाएर शिशुलाई घरमा ल्याएका थिए । शिशु अनुमानित ४ दिनको रहेको बुझिएको छ । दाउरामा जाने टोलीले शिशुलाई जङगलको झाडीमा भेट्दा…
समाचारबच्चा जन्माएर झाडीमा फालेपछिLeaveacomment
काँग्रेसमाथि प्रचण्डको हमला
काठमाडौं ।काँग्रेसमाथि प्रचण्डको हमला प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लासको राजनीति गर्न खोजेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आरोप लगाएका छन् । उनले डा गोविन्द केसीको अनशनलाई माध्यम बनाएर कांग्रेसले राजनीतिक दाउपेच गरेको आरोप लगाएका हुन् । उनले अनसनरत डा। गोविन्द केसीको काम नै अनसन बस्ने भएको र त्यसलाई नेपाली समाजले पचाइसकेको टिप्पणी गरे । तर कांग्रेसले डा गोविन्द केसीको अनशनलाई भजाएर आन्दोलन गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले डा। केसीको जीवन रक्षाको दायित्व सरकारको…
समाचारकाँग्रेसमाथि प्रचण्डको हमलाLeaveacomment
ग्राण्डीमा दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टर अस्पतालको छतबाट तल झारियो
काठमाडौं । ग्राण्डीमा दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टर अस्पतालको छतबाट तल झारियो गत असार १५ गते शनिवार ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा मेडिकल टिम लिन आएको र हेलिप्याडमा ल्याण्ड गर्दा दुर्घटनाग्रस्त भएको सिम्रिक एयरको हेलिकप्टर आज अस्पतालको छतबाट तल झारिएको छ । अस्पतालको १४ तल्ला माथि छतमा रहेको दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टर हटाउने काममा हिजो र आज सिम्रिक एयरको इन्जिनियरिङ तथा रेस्क्यु टिम दिनभर ब्यस्त रहेको थियो । यसरी हेलिकप्टर हटाइसकेपछिको अवस्थामा अस्पतालको रुफटप हेलिप्याड सुरक्षित रहेकोसमेत जानकारी गराइएको छ । त्यस्तै दुर्घटना भएलगत्तै ग्राण्डी अस्पतालको सुरक्षा तथा रेस्क्यु टोली, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शशस्त्र प्रहरी बल…
समाचारग्राण्डीमा दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टर अस्पतालको छतबाट तल झारियोLeaveacomment
फेरी ट्रिपर ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएपछि जलाईयो
काठमाडौं । फेरी ट्रिपर ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएपछि जलाईयो, काभ्रेको बनेपामा चारदोबाटोमा ट्रिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएपछि बनेपा तनावग्रस्त बनेको छ । आक्रोशित सर्वसाधारणको जमातले ट्रिपरमाथि आगजनी समेत गरेका छन् । बा२ख ३९३४ नम्बरको टिप्परले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको हो । घटनाको विरोधमा स्थानीयले ठक्कर दिने टिप्परमा आगजनी गरेका छन् ।मृतकको सनाखत हुन सकेको छैन । स्थानीयको विरोध र टिप्परमा आगजनीपश्चात धुलिखेल बनेपा -सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ । ट्रिपरकाे अत्याधिक घटनाले साेच्नपर्ने वातावरण तय गरेकाे छ, एती छाेटाे समयमै एती धेरै ट्रिपर बाटनै घटना, खासगरी माेटरसाइकल र स्कुटर मा भएकाे …
समाजफेरी ट्रिपर ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएपछि जलाईयोLeaveacomment
काठमाडौँ । धर्म परिवर्तन गराए पाँच वर्ष कैद ! भदौ १ देखि व्यक्तिको सहमतिविना जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने जोकोहीलाई पाँच वर्ष कैद हुने कानुनी व्यवस्था लागू हुने भएको छ । भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन र फौजदारी कसुर ऐन २०७४ निर्माण भएको छ । ऐनमा भनिएको छ– ‘कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिनुहुँदैन । दोषी प्रमाण भयो भने कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म…
समाचारधर्म परिवर्तन गराए पाँच वर्ष कैद !Leaveacomment
धनगढी । धान बाली खेतमै यसरी सुक्न थालेपछि यस वर्ष साउन महिना लाग्दासम्म प्रदेश नं ७ का अधिकांश जिल्लामा ठूलो मनसुनी वर्षा हुन सकेकाे छैन । यसले गर्दा रोपिएको धानबाली खेतमै सुक्न थालेको छ । आकासको पानीको भरमा रोपाइँ गरिएको धानबाली पर्याप्त वर्षा नहुँदा प्रभावित भएको हो । रोपिएको धानमा पानीको अभाव सिर्जना भएपछि खेतमा चिरा पर्न थालेको स्थानीय किसान जंगवीर चौधरीले बताउनुभयो । “बोरिङबाट पानी तानेर धान रोपाइँ गरियो,” किसान जंगवीरले भन्नुभयो, “वर्षा नहुँदा देखिएको खडेरीले धान सुकेर जाने चिन्ता लागेको छ ।” खास गरी प्रदेशका पहाडी…
समाचारधान बाली खेतमै यसरी सुक्न थालेपछिLeaveacomment
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ओलीले डा केसीसँग सीधै वार्ता गर्ने अनशनरत डा गोविन्द केसीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीधै वार्ता गर्ने भएका छन्। वार्ता टोली फेरिने तर समस्याको समाधान कहिल्यै नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सोझै डा केसीसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने भन्दै सन्देश पठाएका छन्। केसीले भने जबाफ दिइसकेका छैनन्। ‘पटकपटक वार्ता र सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएकाले प्रधानमन्त्रीले ‘वान इन वान’ वार्ता गर्न चाहनुभएको हो,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘अनशन छाडेर स्वस्थ हुनुहोस् अनि वार्ता गरौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, त्यो सन्देश पठाइ सकिएको छ।’ उनका…
समाचारप्रधानमन्त्री ओलीले डा केसीसँग सीधै वार्ता गर्नेLeaveacomment
काठमाडौं । हाम्रा मन्त्री कस्ता : विनाअध्ययन प्याच्च बाेल्ने अनि माफी माग्ने ! वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्काे गर्दै विवादमा मुछिएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ अाफूले बाेलेकाे कुरालार्इ लिएर चर्काे विवादमा तानिएका छन् । कानुनमन्त्री तामाङले बंगलादेशमा पढ्न जाने नेपाली छात्राहरुबारे प्याच्च बाेलेपछि उनकाे नियत र अध्ययनकाे दायरा कति संकुचित रहेछ भन्ने उदांगिएकाे छ । बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नेपाली छात्राहरू याैन शाेषणकाे शिकार भइरहेकाे भन्ने अाफ्नै भनाइ फिर्ता लिँदै उनले सार्वजनिक रूपमा माफी मागेका छन् । मन्त्री तामाङले एउटा विज्ञप्ति…
राजनीतिहाम्रा मन्त्री कस्ता : विनाअध्ययन प्याच्च बाेल्ने अनि माफी माग्ने !Leaveacomment
उज्जन पौडेल स्वास्नी हराएको सूचना : ऊ कहाँ छे थाहा भए खबर पाऊँ ! ठुस्स गनाएको काखी सुँघेर एक स्वाटमा जाँडको बटुको रित्याएपछि काइँलो बाहिरिन्छ । उसको खातामा निक्कै हिसाब बाँकी छ । सधैँ एक दुई बटुका जाँड रित्याएर खातामा पैसा चढाई ऊ त्यसैगरी बाहिरिने गर्छ । “यो मोराले कहिल्यै पैसा तिर्ने भएन”, होटेल साहुनी आजित भएर बेलाबेला ठूल्ठूलो स्वरले हपार्ने गर्थी ताकि ऊ लाजले पैसा तिरोस् । काइँलो भालि पल्टै लगेर सुक्का मोहोर होटेलको टेबलमा झारिदिन्थ्यो गरर्र्र्र्र् । ऊ त्यसो गर्दा साहुनीले गरेको बेइज्जतको भरपाई भएको ठान्दथ्यो ।…
मनोरञ्जनस्वास्नी हराएको सूचना : ऊ कहाँ छे थाहा भए खबर पाऊँ !Leaveacomment
विराटनगर । पाइपलाइनबाट घरघरमा ग्यास पुर्‍याउने काम सुरू भएपछि घरघरका भन्सामा पाइपलाइन जडान गरेर ग्यास पुर्‍याउने काम विराटनगरमा सुरु भएको छ । विराटनगर १४ मा रहेको श्रीकृष्ण गौ सेवा सदनमा ३२० घनमिटर क्षमताको बायो ग्यास उत्पादनको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि नेपालमा पाइपलाइनबाट भान्सामा ग्यास पुर्‍याउन थालिएको हो । उर्जा मन्त्रालयअन्र्तगतको वैकल्पिक उर्जा प्रर्वछन केन्द्रले गौ सदनमा बायो ज्यास उत्पादनको काम थालेको डेढवर्षपछि यसको परीक्षण सुरु भएको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ । विश्व बैङ्कको ८४ लाख रुपैयाको सहयोग र गौसदनको २० प्रतिशत लगानीमा बायो ग्यास उत्पादन थालिएको हाे ।…
समाचारपाइपलाइनबाट घरघरमा ग्यास पुर्‍याउने काम सुरू भएपछिLeaveacomment